Ny programa webcam tsara indrindra 8 ho an'ny Windows, macOS ary Linux 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Afaka mahita sokajy sasany amin'ireo programa webcam amin'ny tsena ianao. Ny rindranasa sasany dia ampiasaina hanandramana ny fakan-tsary PC ary hijerena raha manome izay ampanantenainy. Ny hafa kosa manana tolo-kevitra mahafinaritra kokoa ary mampiditra sivana amin'ilay sary nalaina. Misy ihany koa ireo safidy mamela anao hanoratra ny zavatra rehetra aseho amin'ny famerenana aorian'izay.
Ireto ambany ireto ny programa webcam tsara indrindra 8 ho an'ny Windows, macOS, ary Linux. Zahao hoe!
ManyCam dia manolotra fiasa mahasoa maromaro ho an'ny kaonferansa video na fandraisam-peo lesona. Ny fampiharana dia ahafahanao manoratra sy manao sary eo amin'ny efijery, manampy sary amin'ny horonan-tsary, manisy endrika, ankoatry ny hafa. Azo atao koa ny manarona ny sary avy amin'ny webcam miaraka amin'ny fisie, mampiseho ny efijery amin'ny solosaina na koa ny fakantsary finday.
Ny mpampiasa dia mbola afaka manamboatra fanitsiana loko, zoom, manova opacity, ary koa mampiasa sivana mahafinaritra sy vokany. Misy ihany koa ny safidy handefasana mivantana amin'ny sehatra samihafa toa ny YouTube, Twitch, ary Facebook. Na, raha tianao, tehirizo ny atiny hatramin'ny 720p amin'ny kinova maimaim-poana sy 4K amin'ny kinova aloa.
Ny video dia azo tehirizina amin'ny endrika malaza toa ny MP4, MKV, MOV, ary FLV.
ManyCam (maimaim-poana, miaraka amin'ny safidy ho an'ny drafitra karama miaraka amina endri-javatra bebe kokoa ary tsy misy mari-drano): Windows 10, 8 ary 7 | macOS 10.11 na avo kokoa
YouCam dia programa iray manolotra fitaovana ho an'ny asa sy lalao. Mifanaraka amin'ireo serivisy fiantsoana horonan-tsary isan-karazany sy ireo sehatra mivantana amin'ny horonan-tsary, dia misy sivana fanatsarana tarehy amin'ny tena izy io. Tsy lazaina intsony ny valin'ny zava-misy an-jatony.
Raha ny fampisehoana kosa dia manana loharanom-pahalalana ny mpampiasa, manampina ny sary miaraka amin'ny sary, mizara ny efijery, sns. Ny interface tsara dia ahafahanao mahita ireo lafin-javatra lehibe miaraka amin'ny mora.
Raha misafidy ny handraikitra ianao, ny horonan-tsary dia azo tehirizina amin'ny vahaolana hafa, ao anatin'izany ny Full HD, amin'ny endrika AVI, WMV, ary MP4.
YouCam (andrana maimaimpoana mandritra ny 30 andro): Windows 10, 8, ary 7
3. Fanadinana Webcam
Webcam Test dia fampiharana an-tserasera izay ahafahanao mizaha ireo fiasa atolotry ny fakan-tsary PC amin'ny fomba tsotra. Ampidiro fotsiny ny tranokala ary fidio ny bokotra Tsindrio eto raha hamela ny fidirana amin'ireo mpampahafantatra webcam. Avy eo mankanesa any Andramo ny fakantsariko. Mety maharitra minitra vitsivitsy ny fanombanana.
Azo atao ny mahafantatra angon-drakitra toy ny famahana, ny tahan'ny kely, ny isan'ny loko, ny famirapiratana, ny famirapiratana, sns. Ho fanampin'ny fitsapana ankapobeny, ny mpampiasa dia afaka manombatombana lafiny manokana kokoa toy ny famahana, ny tahan'ny fefy ary ny mikrô. Misy ihany koa ny safidy hanoratra horonantsary amin'ny tranokala tenany ary hitahiry azy ho WebM na MKV.
Webcam fitsapana (maimaim-poana): Web
4. Fakan-tsary Windows
Windows dia manolotra programa webcam webcam rafitra. Windows Camera dia safidy tsotra nefa azo ampiasaina, indrindra ho an'ireo izay mila fiasa fototra fotsiny. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny maody Professional ao amin'ny sehatra, azonao atao ny manitsy ny fandanjana fotsy sy ny famirapiratan.
Mba hijanonana ao anaty frame foana, ny modely dia manana maodelim-panala. Misy ihany koa ny safidy hanovana ny kalitaon'ny horonantsary eo anelanelan'ny 360p sy Full HD sy ny fahita matetika, fa amin'ny 30 FPS hatrany. Ny valiny dia voatahiry ao amin'ny JPEG sy MP4.
Fakan-tsary Windows (maimaim-poana): Windows 10
5. Kilalao Webcam
Webcam Toy dia fampiharana an-tserasera tsotra ho an'izay mitady sivana mahafinaritra haka sary amin'ny webcam. Mandehana fotsiny amin'ny tranokala ary kitiho Vonona? Mitsikia!. Raha manakana ny fidirana ny browser dia manome alalana hampiasa ny fakantsary PC.
Avy eo tsindrio ilay bokotra Normal mba hampidirana ny vokany rehetra misy. Misy safidy am-polony maro, ao anatin'izany ny kaleidoscope, ny fomban'ny matoatoa, ny setroka, ny sarimihetsika taloha, ny sary miaina ary maro hafa. Safidio izay tianao ary avy eo mankanesa amina sary masina fakan-tsary hisoratra anarana.
Ny valiny dia azo tehirizina amin'ny PC na zaraina amin'ny Twitter, Google Photos na Tumblr mora foana.
Kilalao Webcam (maimaim-poana): Web
Mihoatra lavitra ny programa webcam, OBS Studio dia fantatra amin'ny fahaizany mifanentana amin'ireo tolotra fandefasana horonantsary lehibe rehetra. Anisan'izany, Twitch, Facebook Gaming ary YouTube.
Saingy, mazava ho azy, mamela anao hanoratra ny sarin'ny fakantsarinao ihany koa izany ary hitahiry ny atiny ao amin'ny MKV, MP4, TS ary FLV. Ny vahaolana dia manomboka amin'ny 240p ka hatramin'ny 1080p.
Ny rindrambaiko koa dia manana fitaovana fanovana maro afaka manao ny fitaovanao ho matihanina. Anisan'ireny ny fiasa ho an'ny fanitsiana loko, ny fiaviana maintso, ny fampifangaroana fantsom-peo, ny fihenan'ny tabataba ary maro hafa.
Fianarana OBS (maimaim-poana): Windows 10 sy 8 | macOS 10.13 na avo kokoa | Linux
GoPlay dia mety ho safidy tsara ho an'ny vao manomboka, saingy te hiala amin'ny fototra izy ireo. Ny programa dia manolotra asa ho an'ny fanoratana eo amin'ny efijery, ary koa amin'ny fampidirana sary. Ny horonan-tsary dia azo soratana hatramin'ny 4K amin'ny 60fps ary ahitsy ao anaty tonian-dahatsoratra namboarina.
Ny fampiharana dia ahafahanao manoratra ny efijery PC anao sy manao horonantsary mivantana. Ny kinova maimaim-poana amin'ny fampiharana dia ahafahanao mirakitra horonantsary 2 minitra fotsiny, miaraka amin'ilay mari-drano. Ny valiny dia azo tehirizina amin'ny MOV, AVI, MP4, FLV, GIF na amin'ny audio.
Mandehana milalao (maimaim-poana, miaraka amin'ny kinova feno): Windows 10, 8 ary 7
Apowersoft Free Online Screen Recorder dia mety ho an'ireo mila manoratra efijery PC eo am-pijerena sary webcam. Manolotra loharano ho an'ny fanoratana an-tsoratra an-tserasera sy amin'ny endriny ny tranonkala. An-tserasera ny zava-drehetra, fa alohan'ny hanombohanao dia mila misintona a rocket launcher kely tsy misy PC.
Ny valiny dia azo tahirizina ao amin'ny solo-sainanao toy ny horonan-tsary na GIF, tehirizina amin'ny rahona, na zaraina mora amin'ny YouTube sy Vimeo. Ny famahana dia azo apetraka ho ambany, salantsalany na avo.
Apowersoft Free Online Screen Recorder (maimaim-poana): Web
Ampiasao toy ny webcam PC ny findainao amin'ny alàlan'ny Wi-Fi na tariby USB
Fampiharana hanoratana maimaim-poana ny efijery PC anao
Fampiharana mpitsikilo mahasoa